हँसाउने मदनकृष्णको रुवाउने जीवन कथा
उनलाई आमाको मुहारसम्म याद छैन्। याद होस् पनि कसरी। उनले ६ महिनाको उमेरमै आमालाई गुमाए। आमाको माया के हुन्छ? उनले महशुस गर्न पनि पाएनन्। जन्मदिने आमाले त छाडेर गईन्। अरुको ..
यसरी गोप्य राखिएको थियो, निश्चल र स्वस्तिमाको प्रेम सम्बन्ध
भगवानमा विश्वास गर्नेहरु भन्छन्, मानिसको जोडी भगवानले नै जुराएर पठाउँछन् । कसलाई कस्तो जोडी जुराउने उनैले निर्णय गर्छन् । त्यस विपरीत जान खोज्नेहरु मायाको सट्टा पल पल पिडाले तड्पीन पुग्छन् ..
लक्कि बन्यो ‘ए मेरो हजुर २’ !
नायिका झरना थापा निर्देशीत ‘ए मेरो हजुर २’ लक्कि सावित भएको छ। सोलो रिलिज हुने मौका पाएको फिल्मलाई सरकारी विदाले झनै राहत दिएको हो।हाल’ए मेरो हजुर २’सँग प्रतिष्पर्धा गर्न बजारमा ..
यसरी खिचिदैछ ‘समरलभ’ तर लुकाईयो साया र अतितलाई!
उपन्यास ‘समर लभ’ कुन युवा युवतीको मनमा नहोला, समर लभका लेखक सुविन भट्टराईलाई अहिलेका फ्रक्रदा कुन पुस्ताले नचिन्ला र? हो यही पुस्तक समर लभ लाखौ पाठकको मायाँ पश्चात अहिले पाठक ..
सर्यो ‘ऐश्वर्य’ को रिलिज डेट ?
अभिनेता रमेश उप्रेतीको चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ अब कार्तिक ९ मा रिलिज हुने भएको छ। यसअघि कात्तिक २ मा रिलिज हुने भनिएको’ऐश्वर्य’को रिलिज डेट बलिउड फिल्मका कारण पछि धकेलिएको हो। निर्माता तथा ..
‘भुईमान्छे’ मा ‘रङ टाइम’का सहिन प्रजापती
नेपालको पहिलो चर्चित वेबसिरिज रङटाइमका निर्देशक एब मुख्य कलाकार सहिन प्रजापती अहिले नेपाली चलचित्र भुईमान्छे काकारण आफ्ना दर्शकमाझ लोकप्रिय भएका छन् । रङ टाइमको दोस्रो सिजन आउन अघी उनका फ्यानका ..
नेपाली कलाकारका‘बा’हरु(फोटो फिचर)
आज कुशे औँशी अर्थात बुवाको मुख हेर्ने दिन । आज बुवाको सम्मान गर्दै मिष्ठान्न भोजन तथा उपहार दिई मुख हेर्ने पनि गरिन्छ । बुवा नहुनेहरुले पितृको तृप्ती तथा कल्याणको कामना ..
रेखालाई नायक बनाउने पर्दा पछाडिका प्रशिक्षक: ‘तँ’ भन्थिन् बुवालाई
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिका रेखा थापाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएकी छिन् । नारी प्रधान चलचित्र निर्माण गरेर मनोरञ्जनसँगै महिला सशक्तिकरणमा गतिलो योगदान पुर्याइरहेकी छिन् । जसकारण उनी नायिका भएर पनि ..
बल्ल बाहिरियो अनमोलको लुक्स, देखिए यस्ता (फोटोहरु)
केहि बर्षयता अनमोल केसीको चर्चा निकै चुलिएको छ । आफ्नो चकलेटी लुक्समार्फत सबैलाई मोहित पारेका उनको केटी फ्यानहरु अत्याधिक छन् । चलचित्र ‘होस्टेल’ मार्फत नेपाली सिने उद्योगमा प्रवेश गरेका उनको ..